Sombin-tsofina, Fiangonan'izao tontolo izao Switzerland (Switzerland)
Dia novonoiny koa ny fanatitra dorana, ary nentin'ny zanak'i Arona ny ra, dia nafafiny manodidina ny alitara. Dia nateriny tamin'ny lohany ny fanatitra dorana, ary nodorany teo ambony alitara.
Levitikosy 3, 9 - 12 (fandikana Zurich)
Rehefa mieritreritra ny hanome ny foko amin'ny Tompo aho dia toa maivana loatra ary toa tsy takatry ny sainay ilay izy indraindray. Hoy izahay: "Tompo ô, omeko anao ny foko, afaka hanananao ianao" ary mieritreritra izahay fa ilaina izany. Te hasehoko anao fa ny andinin-teny etsy ambony momba ny fibebahana dia ahitana hafatra tadiavin'Andriamanitra homena antsika.
Indraindray rehefa miteny amin'ny Tompo isika hoe ato am-poko ato dia toy ny hoe hanipy azy eo alohany isika. Tsy natao toy izany. Raha manao an'izany isika, dia mibebaka be ny fibebahantsika, ary tsy mitodika miala amin'ny fihetsika manota isika. Tsy atsipy amin'ny hena fotsiny izahay, fa raha tsy izany dia tsy andraso tsara. Toy izany koa amin'ny fontsika manota, mila mahita mazava izay tokony hialantsika isika.
... dia nopetahany ny fanatitra dorana, anisan'izany ny lohany, ka nodorany teo ambony alitara.
Tsikaritray fa natolotry ny zanak'izy roa lahy roa lahy ny rainy. Tsy vitan'izy ireo fotsiny hoe apetraka amin'ny lafin'ny alitara ny biby novonoina. Tokony hanao toy izany koa amin'ireo niharam-boina isika, amin'ny fontsika. Raha tokony hiteny hoe "Tompoko ianao manana ny foko", dia tokony hanolotra zavatra manimba ny fontsika amin'Andriamanitra isika. "Tompoko dia omeko anao ny fifosako, omeko anao ao am-poko ny faniriako, avelako ny fisalasalako". Raha manomboka manome ny fontsika amin'Andriamanitra isika amin'ny fomba toy izany, dia hanaiky izany ho sorona Izy. Ireo zava-dratsy rehetra iainantsika avy eo dia mihodina ny lavenona eo anaty otely, izay hivoahan'ny rivotra avy amin'ny fanahy.
Ray ô, entiko isaina isaky ny androm-piainako, isa-tokana mandra-pahazoanao ny zavatra rehetra, amena
by Fraser Murdoch,
Mpitoriteny WKG any Skotlandia
© NY FIVORIANA AN'ANDRIAMANITRA (SWITZERLAND) • CONTACTS • LEGAL NOTES • Fitsipika • EMAIL